Afrika, 24 June 2019
Isniin 24 June 2019
3 qof oo lagu helay dambiga weerarkii Jaamacadda Gaarisa
Maxkamad ku taalla dalka Kenya ayaa saddex nin ku heshey dambi ah iney in Al-Shabaab ay ka gacan ku siiyeen weerarkii ay ku qaadeen Jaamac Gaarisa oo ay ku dileen 148 qof, kuwaasi uu badnaa Ardeydii Jaamacadaasi.
Masar oo diiday in la baaro geerida Mursi
Masar ayaa maanta ku eedeysay QM inay siyaasadeeneyso geerida madaxweynihii hore ee dalkaas Maxamed Mursi, ayada oo ku baaqeysa “baaritaan madax-banaan” oo lagu sameeyo sababta uu u dhintay.
Kenya: Maxkamad go'aan ka gaaraysa tuhmaneyaal Shabaab ah
Maxkamadda magaalada Naiorbi ayaa la filayaa inay soo gaba gabayso dacwad la xiriirta afar nin oo ku eedeysnaa inay kamid ahaayeen maleeshyaadkii kooxda Al-Shabaab ee bishii April ee sanadkii 2015-kii weerarka khasaarah badan dhaliyay ku qaaday jaamacadda magaalada Gaarissa.
Madaxweyne Maxamed Morsi oo loo aasay
Madaxweynihii ugu horreeyey ee si dimoqraadi ah loo doortay ee dalka Masar, Maxamed Morsi ayaa maanta la aasay, ayada oo ay soo kordhayaan baaqyada ku saabsan in la baaro sababta dhimashadiisa.
Warar degdeg ah oo hadda naga soo gaaray magaalada Qaahira ee dalka Masar ayaa sheegaya in madaxweynihii hore ee waddankaais Maxamed Mursi uu ku dhintay maxkamad ku taala magaalada Qaahira.
Saddex qarax oo is-miidaamin ah oo ka dhacay Nigeria
Ugu yaraan 30 qof ayaa lagu dilay saddex qarax oo la rumeysan yahay inay fulisay kooxda Boko Xaram oo ka dhacay waqooyiga bari ee dalka Nigeria, sida ay werisay hay’adda adeegga gurmadka deg degga ah ee dalkaas.
Qarax Ciidanka Kenya Lagula Eegtay Wajeer
Ku dhawaad 10 askari oo ka tirsan ciidamada ciidamada Kenya ayaa ku dhintay, kaddib marki baabuur ay la socdeen maanta miino lagula beegsaday inta u dhaxeysa deegaannada Qoraf Xaraar iyo Konton oo aad ugu dhaw xadka ay Kenya la wadaagto Soomaaliya.